FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AN'I COLLIE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika an'i Collie
Koda ilay Border Collie mainty sy fotsy manome ny tongony
Ny Border Collie dia alika miasa antonony sy matanjaka. Somary lava kokoa noho ny hahavony ny vatany. Ny karan-doha somary fisaka dia antonony ny sakany. Mitovy halava ny karandoha sy ny vava, ary mijanona kely. Mihaona amin'ny vazana ny hety mahery. Ny maso boribory boribory tsara sy miloko volontany, afa-tsy amin'ny merles izay manga na iray ny maso. Ny sofina salantsalany dia atokana tsara, na entina mitsangana na semi-erect. Ny tongotra eo anoloana dia mahitsy raha zahana avy eo aloha, fa somary mitongilana kosa rehefa jerena avy eo. Ny rambony salantsalany dia napetraka ambany hahatratra ny hock farafaharatsiny, somary miakatra rehefa faly ny alika. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Ny palitao roa sosona dia mahatohitra toetr'andro, matevina ary akaiky. Misy karazany roa ny palitao: palitao fohy sy malama (eo amin'ny 2,5 sentimetatra eo ho eo ny halavany) ary palitao misitatra sy masiaka (eo amin'ny 3,6 cm eo ho eo). Ny loko palitao dia tonga mainty sy fotsy, tricolor, mena sy fotsy, mainty sy fotsy, mavo, mavo sy fotsy, sable ary mainty daholo. Ny karazany lava volo dia tokony hanana borosim-bolo sy rambony. Ny volo amin'ny tarehy, sofina ary tongotra eo aloha dia fohy sy malama foana. Satria ny Border Collies dia mitombo amin'ny fahaizan'ny miasa sy ny faharanitan-tsaina fa tsy amin'ny hatsaran-tarehy ara-batana, miovaova be ny fifanarahana.
Ny Border Collie dia tena manan-tsaina ary mahafantatra ny manodidina azy. Izy io dia afaka ampiofanina amin'ny ambaratonga avo. Ity dia iray amin'ireo alika miasa mafy indrindra miroborobo amin'ny fiderana. Ny Border Collies dia misolo tena an'ireo mpitarika amina sehatra fifaninanana amin'ny fanatanjahantena isan-karazany, faran'izay mahay amin'ny fahaizany mibaiko, fankatoavana, fitsapana mpiandry ondry ary Frisbee ™. Ireo fifaninanana ireo dia mahatratra ny làlany, ary matetika ampiasaina ary mandresy. Ho an'ireo maniry hahatratra haavo ambony amin'ny fanatanjahan-tena alika, ny Border Collie dia fanomezana avy any an-danitra. Faly miaraka amin'izy ireo ihany koa ny tantsaha, satria namboly toy ny tantsaha izy ireo tamin'ny voalohany. Ny Border Collie dia mazoto be amin'ny tanjaka lehibe. Raha mahazo asa ampy izy ireo hitazomana azy ireo hipetraka sy fanatanjahan-tena ampy , ny Border Collie dia hiaraka am-pifaliana miaraka amin'ny alika sy ankizy hafa, na izany aza dia mety ho mahery setra amin'ny alika hafa mitovy fananahana aminy ianao raha tsy mampiseho mpitarika 100% miaraka aminy. Tsy tokony hatokisana izy ireo biby fiompy tsy kaninina kely , na izany aza, misy be dia be ny Border Collies izay velona sy mifanerasera amin'ny saka fianakaviana. Ity karazana ity dia mety ho mora tohina ary tokony ho mifanerasera tsara toy ny alika kely hisorohana saro-kenatra. Mba hahasambatra tokoa dia mila fitarihana tsy tapaka maro izy ireo, fampihetseham-batana isan'andro, ary asa iray hibahana ny sain'izy ireo. Ny Border Collies matetika dia hanohitra ny fahefan'ny tompony rehefa zatovo izy ireo. Miovaova be ny haavon'ny Dominance, na dia ao anatin'ny fako iray ihany aza. Ianao dia tokony ho mafy orina, mpitarika tsy miovaova ity alika ity, na mety manandrana izy maka . Raha avelanao hisolo toerana izy, tsy misy fiarahana miasa ara-batana sy fanatanjahan-tena ara-batana sy ara-batana, dia mety hihetsika be izy ary ho mora tohina, ka hahatonga azy safidy ratsy amin'ny fianakaviana manan-janaka kely. Ny Border Collie dia mpandala ny tonga lafatra ary manana finiavana maharitra hampifaly. Ity karazana ity dia miaina amin'ny fanompoana anao isan'andro isan'andro. Tsy biby fiompy mety ho an'ny olona izay tsy mikasa ny handany fotoana be amin'izany. Ireo alika ireo dia marani-tsaina loatra ka mandry ao an-trano tontolo andro tsy misy atao. Raha tsy vonona ny hametraka ora maro isan'andro ianao hitandrina tsara ireo alika ireo amin'ny saina sy vatana, dia ampirisihina ianao tsy handray Border Collie. Misy karazana hafa izay mitovy nefa tsy mitaky toy ny Shetland Sheepdog na ny Mpiandry Aostraliana , izay samy trainbable be, mbola mila manentana sy manao fanatanjahan-tena, saingy matetika afaka miala kely noho ny Border Collie. Raha tsy ampy ny hetsika dia hahita ny asany hataony ny Border Collie, ary mety tsy izany no tao an-tsainao fony nilaza ilay teny hoe ASA. Rehefa tsy atao fanamby isan'andro dia afaka izy ireo ary ho tonga Handringanana . Tsy afaka avela ela be izy ireo ary tsy misy atao raha tsy nampihetsi-po izy ireo ka samy reraky ny sainy ara-tsaina sy ara-batana. Ny Border Collie Border dia tsy hanao biby fiompy tsara, satria mety ho lasa neurotic ary mety hampiasa ny talenta mpanakanto afa-mandositra, ankoatry ny hafa olan'ny fitondran-tena . Manana herim-po mpiambina mahery izy ireo ary mety manandrana miteraka zaza sy olon-tsy fantatra ary tsy maintsy lazaina fa tsy ekena izany.
Haavony: Lehilahy 19 - 22 santimetatra (48 - 56 cm) Vavy 18 - 21 santimetatra (46 - 53 cm)
Milanja: Lehilahy 30 - 45 pounds (14 - 20 kg) Vehivavy 27 - 42 pounds (12 - 19 kg)
Mora voan'ny androbe, dysplasia hip, PRA (Collie Eye Anomaly) ary marenina. Matetika tsy mahazaka parasy. Ny alika mpiandry sasany dia mitondra ny tsimokaretina MDR1 izay mahatonga azy ireo ho mora tohina amin'ny zava-mahadomelina sasany izay tsy maninona raha manome alika hafa, fa raha voasedra tsara ho an'ity fototarazo ity dia mety hahafaty azy ireo.
Ny Border Collie dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Mavitrika be izy ireo ao an-trano ary manao tsara indrindra amin'ny velaran-tanety. Ity karazana ity dia ho tsara amin'ny trano fitahirizam-bokatra raha manana asa isan'andro sy mahita be ny mpikarakara azy. Ity karazana ity dia tsy mifanaraka amin'ny fiainana voafatotra an-tokotany ao an-tokontany tontolo andro.
Ny fampihetseham-batana fotsiny dia tsy ampy ho an'ity alika tena manan-tsaina sy mahery fo ity. Te hiasa izy ireo ary tsy maintsy manao izany amin'ny vatana sy saina iray, manao asa samihafa. Haingam-pandeha sy mailamailaka, ireo alika kely velona ireo dia manana angovo tsy manam-petra ary miroborobo amin'ny asa mafy sy lalao. Tokony horaisina amin'ny a koa izy ireo dia an-tongotra lavitra sy lava . Mahafaly azy ireo ny mahita mitanjozotra aorian'ny baolina na mitondra ondry very any am-bala.
Alika kely 4 - 8, 6 eo ho eo
Ny sisin-tany Collie dia mila manadio sy miborosy matetika mba hitazomana ny palitao. Ilaina ny fikarakarana fanampiny rehefa raraka ny akanjo ambany sy matevina. Mandrosoa na shampooo maina raha tsy ilaina. Zahao tsy tapaka ny sofina sy ny palitao raha misy kongona. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ilay Border Collie dia nantsoina tamin'ny voalohany hoe 'Dog Schiff Sheep' ary niainga tany Northumberland manamorona ny sisintanin'i Ekosy sy Angletera. Taranak'alika izy io izay ampiasain'ny Vikings ho an'ny reindeer, ilay tranainy britanika taloha, miaraka amin'ny spaniel. Nantsoina hoe 'workaholic' noho ny halehibeny ary tiany ny miasa, ny Border Collie dia manana maso afaka mana hipnotis ny omby. Izy io dia afaka mahafehy ny karazan'omby rehetra amin'ny alàlan'ny miondrika sy manaitra ireo biby amin'ny fijeriny mafy. Iray amin'ireo karazam-borona azo tsaboina indrindra, ny Border Collie koa dia alika mahomby sy alika mpamantatra baomba ary mpanao asa matetika amin'ny fankatoavana, fahakingana, fisedrana Frisbee ™, asan'ny polisy, fikarohana sy famonjena, Flyball, fanaovana tetika ary fankatoavana mifaninana. Ny Border Collies sasany dia nampiofanina tamim-pahombiazana ho alika mpitari-dalana ho an'ny jamba. Vokatra tena tsara izao no azo miaraka amin'izy ireo amin'ny fanampiana ankapobeny an'ireo sembana any Netherlands. Ny Border Collie dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny 1995.
alika tendrombohitra tendrombohitra bernese mampifangaro alika kely amidy
ABC = Ny American American Border Collie Association
'Ity i Franny Rose, ny vadiko vavy voasoratra anarana Collie, 10 volana. Trio mena mena ny fandokoany. '
'Franny dia alika mahafinaritra ary marina amin'ny fenitry ny Border Collie. Manana maso matanjaka izy, tena mpanao fanatanjahan-tena ary mpiompy. I Franny dia mahafinaritra ihany koa miaraka amin'ny olona, ​​olon-dehibe ary ankizy mitovy. 11 volana izy izao ary milanja manodidina ny 25-30lbs. Izy dia ho prospect mailaka mahatalanjona, izay zavatra andrandraiko amin'ny taona ho avy! '
Sandra the manga maso Border Collie amin'ny faha-15 volana— 'Nanana an'i Sandra aho hatramin'ny faha-8 taonany. Na dia mihevitra ny tenako ho hentitra be aza aho miaraka aminy dia manana zavatra tsara toa izany isika fifandraisana voalanjalanja . Raha nanana Border Collies tao amin'ny fianakaviana teo aloha aho dia mbola tsy nanana ny ahy ary mipetraka irery ihany koa aho, ka fantatro izay teo alohako. Hatramin'ny fahazazako dia nanomboka nitondra azy niaraka tamiko tamin'ny dia fiara aho izay ahafahanay mandany fotoana betsaka araka izay azo atao. Manokana ampahany lehibe amin'ny fiainako ho azy aho sy ny fahasalamany. Ity karazana ity dia fifaliana lehibe raha manana fiainana mavitrika ianao ary afaka mandray anjara amin'izany izy ireo. Heveriko fa nahazo ny mizana marina aho tamin'ny farany. Manaja ahy tanteraka ho tompony izy ary hita izany. Manaja azy tanteraka toy ny 'andriambavy' aho na dia tsy nilaza taminy akory aza aho, vehivavy fisty izy! Ny masony manga no anton-dresaka sy fialonana ny maro. Samy voatahy tokoa izahay roa. '
Gill ny sisin-tany Collie Border Collie amin'ny faha-3 taonany— 'Gill dia azo avy amin'ny faritra iray any Kerry, Irlandy antsoina hoe Castlegregory. Ity karazana Collie ity dia niavaka tamin'ny faritra efa an-taonany maro, indrindra ho an'ny ondrilahy mihaino. Tsy mbola nanana Collie mihitsy aho taloha. Voafitaka tanteraka aho. Alika tsara tarehy izy. Ny hany fihemorana dia variana manandrana mandre soavaly amin'ny fahombiazana isan-karazany sy daka vitsivitsy izy. '
Hetsika mahatsiravina avy any Koda the Border Collie, aseho eto amin'ny 1 taona sy tapany
Dane lehibe sy ny husky Mix
Nouba the Border Collie amin'ny 11 volana avy any Brezila
Nouba the Border Collie amin'ny 6 volana avy any Brezila
Jade dia Mena sy fotsy Border Collie
Brin, tricolor Border Collie miloko milanja 1 ½ taona
Daisy Mae ilay Collie morontsiraka mavo
'Cobain dia sisintany voasoratra anarana hoe Border Collie. Izy dia mavo sy fotsy (fantatra amin'ny anarana hoe 'Aostralianina Mena') izay hita ho loko tsy fahita firy ho an'ny karazany, fa tsy hoe 'tsy fahita firy'. Entina mihazakazaka adiny 2 farafahakeliny isan'andro izy ary koa fakana am-polony maro. Vao nanomboka ny hakingana ihany koa isika ary tena tsara fatratra amin'izany. Alika mahagaga ho an'ny fianakaviako amin'ny lafiny rehetra izy. Tsy mino aho fa mbola hanana karazana hafa. '
Hijery ohatra bebe kokoa momba ny Border Collie
Saripika collie sary 1
Saripika collie sary 2
Saripika collie sary 3
Alika Collie sisintany: sary an-tsokosoko voaangona
kely schnauzer Lhasa apso Mix
Saint bernard sy mpiandry mpiandry alemanina
Zavatra shorthaired manondro laboratoara alika kely
alika kely mpiandry ondry doberman sy alemanina
Zavatra mpiandry beagle Mix toetra